एमाले नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरु
काठमाडौँ– नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक अहिले जारी छ । बुद्धनगरस्थित क्वालिटी ब्यांक्वेटमा जारी बैठकमा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेलाको यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा आजै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेका थिए । आजको
स्थानीय सरकार : अनुभव र दिशा निर्देश
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार पुनर्संरचना गरिएका र तीन तहका सरकारको अवधारणाअनुसार स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग खबरहबले प्रतिनिधिमूलकरूपमा संवादको शृङ्खला चलाएको छ । यो संवाद चार वर्षका कामको अनुभवमा केन्द्रित हुन्छ । यसमा तीन तहका सरकारहरूको आपसी
सन् १९९८ को अप्रिलमा हिमालयको खोँच क्षेत्रमा करिब ६ फिट गहिरो हिउँको बाटो हुँदै २२ वर्षीय पेन्पा छिरिङ हाम्रो घरबाट दक्षिणतर्फ रहेको नामागुङ ला क्षेत्रतर्फ गइरहेका थिए । एक तिब्बती गोठाला छिरिङ १५ हजार ७०० फिट अग्लो नामागुङ ला क्षेत्रमा गहुँ, चामललगायतका खाद्य सामग्री बोकेको
काठमाडौँ– महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मोटरसाइकल चोरी नियन्त्रणका लागि छुट्टै युनिट खडा गरेर काम गरिरहेको छ । युनिटले विभिन्न अभियान पनि चलाइरहेको छ । महाशाखाले फेला परेका मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाउने गरेको छ । यही साताको मङ्गलबार महाशाखाले २३ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
रेस्टुरेन्टमा खाना पस्कने अनौठो स्टाइल
‘द फेमिली मेन’ पछि मनोजले बढाए पारिश्रमिक
सत्तारुढ गठबन्धनमा वैद्य माओवादी पनि !
जाजरकोट– युवकलाई बाँधेर कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा निक्कै भाइरल भएको एक
टोकियो- फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले चीनविरुद्ध जापानसँग सुरक्षा गठबन्धनलाई बलियो बनाउने बताएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले जापानी प्रधानमन्त्री यशोहिडे सुगासँग भेटका क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । दुबैजनाको भेटपछि जारी एक संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनविरुद्ध मिलेर काम गर्न तयार रहेको...
नेपालसहितका ६ देशका नागरिकलाई यूएई प्रवेश खुला, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् जान ?
काठमाडौँ- मैत्रीपूर्ण खेलमा बार्सिलोना पराजित भएको छ । प्रि-सिजन अन्तरगत बुधबार राति भएको खेलामा बार्सिलोना अष्ट्रियाको एफसी साल्जवर्गसँग २-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
काठमाडौँ- जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा चीन ७० पदकसहित शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ । अमेरिका र
काठमाडौँ- अष्ट्रेलियाविरूद्धको टी-ट्वान्टी सिरिजमा घरेलु टिम बंगलादेशले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । बुधबार ढाकामा भएको खेलमा बंगलादेशले अष्ट्रेलियालाई ५
मकवानपुर– १ सय २७ किलो लागुऔषध गाँजासहित प्रहरीले मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बुधबार बिहान ७ बजे मनहरी गाउँपालिका–८
झापा- कमल गाउँपालिका–७ मा प्रदेशकै ठूलो पूर्वाधारयुक्त पूर्वाञ्चल आयुर्वेदिक चिकित्सालयको भवन बने पनि हस्तान्तरणको अन्योलले सञ्चालनमा विलम्ब भएको छ । दुई बिघा एक धुर क्षेत्रफलमा